मेरो स्थान साझा गर्नुहोस् - नि: शुल्क अनलाइन उपकरण
मेरो स्थान साझा गर्नुहोस्
तपाइँको वर्तमान स्थान साझा गर्न यो अनलाइन उपकरण को उपयोग गर्नुहोस्. हाम्रा उपकरणहरूले तपाइँलाई तपाइँको स्थानमा समन्वयहरू र ठेगानाहरू फेला पार्न, ठेगानाहरू र समन्वयहरू रूपान्तरण गर्न र स्थानहरू साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ।
यो उपकरण प्रयोग गर्नको लागि, तपाईंले हाम्रो सेवाका सर्तहरु र गोपनीयता नीति सँग सहमत हुनुपर्छ।
हामीले सुरक्षित अनलाइन उपकरणहरू विकास गर्छौं जुन क्लाउड-आधारित वा तपाईंको उपकरणमा स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। हाम्रो उपकरणहरू विकास गर्दा तपाईंको गोपनीयताको सुरक्षा हाम्रो मुख्य चिन्ताहरू मध्ये एक हो।
तपाईंको उपकरणमा स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा अनलाइन उपकरणहरूले इन्टरनेटमा तपाईंको डाटा (तपाईंका फाइलहरू, तपाईंको अडियो वा भिडियो डाटा, आदि) पठाउनु पर्दैन। यी उपकरणहरूलाई धेरै छिटो र सुरक्षित बनाउँदै सबै काम स्थानीय रूपमा ब्राउजरद्वारा गरिन्छ। यो प्राप्त गर्नका लागि हामी HTML5 र WebAssembly को प्रयोग गर्छौं, जुन कोडको एक रूप हो जुन ब्राउजरले नै हाम्रा उपकरणहरूलाई नजिकको स्थानीय गतिमा कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी हाम्रा उपकरणहरू तपाईंको यन्त्रमा स्थानीय रूपमा चलाउन कडा मेहनत गर्छौं किनभने इन्टरनेटमा डेटा पठाउनबाट जोगिनु अझ सुरक्षित हुन्छ। कहिलेकाहीँ यद्यपि यो उपकरणहरूको लागि इष्टतम वा सम्भव छैन जुन उदाहरणका लागि उच्च प्रशोधन शक्ति चाहिन्छ, नक्साहरू तपाइँको हालको स्थानको बारेमा सचेत प्रदर्शन गर्दछ, वा तपाइँलाई डाटा साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ।
हाम्रो क्लाउड-आधारित अनलाइन उपकरणहरूले हाम्रो क्लाउड पूर्वाधारबाट पठाइएका र डाउनलोड गरिएका तपाईंको डाटा इन्क्रिप्ट गर्न HTTPS प्रयोग गर्छन्, र तपाईंसँग मात्र तपाईंको डाटामा पहुँच छ (तपाईंले यसलाई साझेदारी गर्न रोज्नुभएन भने)। यसले हाम्रा क्लाउड-आधारित उपकरणहरूलाई धेरै सुरक्षित बनाउँछ।
थप जानकारीको लागि, हाम्रो गोपनीयता नीति हेर्नुहोस्।
अक्षांश र देशान्तर निर्देशांकहरूको परिचय
अक्षांश र देशान्तर निर्देशांक भौगोलिक निर्देशांक प्रणालीको अंश हुन् जसले पृथ्वीमा कुनै पनि स्थान पहिचान गर्न सक्दछन्। यस प्रणालीले पृथ्वीलाई समेट्ने गोलाकार सतह प्रयोग गर्दछ। यो सतहलाई ग्रिडमा विभाजित गरिएको छ र यस सतहको प्रत्येक पोइन्ट विशिष्ट अक्षांश र देशान्तरसँग मिल्दछ, जस्तै कार्टेसियन प्लेनमा प्रत्येक पोइन्ट विशिष्ट x र y निर्देशांकसँग मेल खान्छ। यस ग्रिडले पृथ्वीको सतह लाई दुई रेखाको रेखासँग विभाजित गर्दछ जुन भूमध्यरेखामा र उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिण ध्रुवको समानान्तरमा जान्छ।
रेखा भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुन्छ र त्यस्तै रेखाहरू जुन पूर्वमा पश्चिम तिर जान्छ, स्थिर अक्षांश मान हुन्छ। तिनीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा समानान्तर भनिन्छ। भूमध्यरेखा माथि दायाँ तिर सर्ने रेखाले अक्षांश मान defined लाई परिभाषित गर्‍यो। उत्तरी ध्रुवको उत्तर तिर जाँदा अक्षांश मान ० उत्तरी ध्रुवमा ० देखि 90 ० सम्म बढ्छ। न्यू योर्क, जुन भूमध्य रेखा र उत्तरी ध्रुवको बीचमा आधा बाटोमा छ र .०.7171455 अक्षांश छ। भूमध्यरेखाबाट दक्षिणमा जाने अक्षांश मानहरू नकारात्मक हुन्छन् र दक्षिण ध्रुवमा -90 ० सम्म पुग्छ। रियो दि जेनेरियो को अक्षांश -22.91216 छ।
उत्तर ध्रुवबाट दक्षिण ध्रुवमा चल्ने रेखाहरूको स्थिर देशान्तर मान हुन्छ। ती लाइनहरूलाई मेरिडियनहरू भनिन्छ। इरील्याण्डको ग्रीनविचमा ० ० को देशान्तर परिभाषित गर्ने मेरिडियन। ग्रीनविचबाट पश्चिमतिर जानुहोस्, अमेरिकातिर भन्नुहोस् देशान्तर मानहरू नकारात्मक हुन्छन्। ग्रीनविचको पश्चिममा देशान्तर मुल्य ० ० देखि १1० सम्म जान्छ र देशान्तर मानहरू ० देखि १ 180० सम्म जान्छ। मेक्सिको सिटीको देशान्तर--.1.१ .1 39 of र सिंगापुरको देशान्तर १० 10..85२११ छ।
अक्षांश र देशान्तर निर्देशांक जीपीएस द्वारा प्रयोगको लागि हो। कुनै पनि समय मा, तपाईंको हालको स्थान सटीक अक्षांश र देशान्तर निर्देशांक द्वारा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
निर्देशनहरू विभिन्न उपकरण र अनुप्रयोगहरूमा तपाईंको स्थान साझेदारी गर्न
अर्को-स्तर क्लाउड-आधारित वा स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अनलाइन उपकरणहरू जसले तपाईंको गोपनीयता र वातावरणलाई पहिलो स्थान दिन्छ।
सेवाका सर्तहरुगोपनीयता नीति
© 2022 itself tools. सबै अधिकार सुरक्षित।